musha AMERICAN BHUKU DZEMAHARA Vatambi veBrazil Vanotamba Rodrygo Enda Nyaya dzeUcheche Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yakazara yeBhola Genius ine zita rekuti “The New Neymar“. Yedu Rodrygo Silva de Goes Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Rodrygo Anoenda Yehucheche Nyaya - Iyo Ongororo Kusvikira.
Ehe, munhu wese anoziva kuti iye ndiye Blitzing Inogumbura Chombo Icho Real Madrid Yaisagona Kupotsa Kunze. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Rodriygo Goes 'biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitangei.
Rodrygo Anoenda Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Rodrygo Silva de Goes akaberekwa pazuva re9th raJanuary 2001 kuna amai vake, Denise Goes uye baba, Eric Batista de Goes mudunhu reSao Paulo, Brazil. Pasi pane mufananidzo wevabereki vake vadiki vakanaka.
Rodrygo Anoenda Kwekutanga Hupenyu Nyaya.
Rodrygo chibereko chemuchato mudiki kwazvo uye wakabudirira pakati pevabereki vake pavakanga vari vaviri vachiri kuyaruka. Baba vaRodriygo Eric parizvino makore makumi matatu nematatu sepanguva (Nyamavhuvhu 34) yekunyora chinyorwa ichi.
Amai vake vanofanirwawo kunge vari mukutanga kwavo 30's. Izvi nekureva zvinoreva kuti baba vake vaive naye paakanga achingova 17 makore ekukura.
Rodrydo akazvarwa semwana wekutanga kuvabereki vake. Akakurira semwana wavo mumwechete kwemakore, asina hama kana hanzvadzi.
Mhuri yaRodrygo Goes vane kwavakabva kumaseru weOsasco iri mudunhu reSao Paulo. Iyo ndeimwe yemaguta akabudirira kwazvo muBrazil nematanho eGDP.
Rodrygo Anoenda Kunze Kwemhuri. Kiredhiti kuCGarchitect.
Guta rakabatikana reSao Paulo kwakakurira Rodrygo rine mota dzakawanda kupfuura Rio de Janeiro ine vanhu. Zvakare, iguta rinozivikanwa kuti rinodya miriyoni imwe kubva pamamiriyoni e1 piza anodyiwa nevanhu vese veBrazil.
Rodrygo Anoenda Dzidzo:
Rodrigo akakurira mumhuri yepakati-yemhuri kumashure iyo mari yaiuya kubva mumitambo. Baba vake vakatanga hupenyu semutambi wenhabvu mumitambo yepasi yeBrazil iyo yakamupa mari isina kukwana yemhuri yake.
Kuve nemwanakomana wake achiri mudiki, Eric akaziva kuti aisazobudirira zvakanyanya pabasa rake. Akafunga zano rekuti arambe achirarama zviroto zvake zvebhora kuburikidza nemwanakomana wake, Rodrygo.
Pakutanga, Rodrygo akatanga nhabvu yake kupukunyuka mumba yekutandarira yemhuri, chiitiko chakakonzera rudo rwake kumutambo wakanaka. Nhabvu dzidzo yakabva yangotevera nekutenda kunhungamiro yababa vake.
Eric uyo aifarira Real Madrid akave nechokwadi chekuti mwanakomana wake anoteedzera hunyanzvi uye nzira yebasa ye Robinho Ivo vaaitora zvakakwirira kwazvo.
Rodrigo haana kungooneswa kumavhidhiyo e Robinho asi akateedzera yega yega mafambiro ake. Pazera re9 paakawana kcal yekuenda kumiedzo naSantos, kudada kwababa vake hakuna kuziva muganho.
Rodrygo Anoenda Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Rodrygo Goes anofarira nhabvu akamuona achidarika miedzo mumavara anobhururuka uye achijoinha chikoro cheSantos chakamupa hwaro hwebasa. Ndichiri kujoina system yevechidiki yeSantos mu2010 pazera re10.
Vabereki vaRodrygo vakasimbirira kuti mwanakomana wavo anofanirwa kupihwa timu yekirabhu futsal. Iyi yaive nzira yakatorwa nemufananidzo wenhabvu yemhuri, hapana mumwe munhu asi ane mukurumbira Robinho.
Kubva chaipo pazera regumi, Rodrygo akatanga kutamba nevakomana vaive vakuru uye vakuru. Aigara achimira kunze mumitambo yake.
Kutamba Futsal sepamberi kwakamubatsira kuve nehunyanzvi hwekuchengetedza bhora patsoka dzake, achidhonzera vadziviriri vekare, uye kushandisa nhanho yake kurova zvibodzwa.
Rodrygo Anoenda Kwekutanga Basa Roupenyu. Kiredhiti kune Zuva.
Ichi chaive chimwe chimiro chakafanana nekaRobinho pamazuva ake ekutanga kutamba neFutsal. SaRodrygo akaenderera mberi achikura, akazviona achiramba achive akanakisa pakati pevamwe vezera rake.
Izvi zvakaunza kumanikidzwa nguva dzose kuti aite izvo zvaakakwanisa kubata nekudaro achiva kaputeni wechikwata chake chevechidiki.
Rodrygo Goes- Kuva mutungamiri wechidiki.
Rodrygo Anoenda Bio - Mugwagwa kune Mukurumbira Nhau:
Rodrygo paakasvika pamakore gumi nematanhatu, hurukuro nezvezvibvumirano zvehunyanzvi uye kudzidza kwakasimuka. Muna Kurume 16, akashevedzwa kumusoro kune timu yekutanga nemaneja Dorival Júnior.
Rodrigo akaita yake Copa Libertadores kutanga musi wa1 Kurume 2018 achiputsa rekodhi semudiki mutambi weSantos kuti aoneke mumakwikwi ane makore gumi nemanomwe nemazuva makumi mashanu ekuberekwa.
Kwangopera vhiki mbiri mumakwikwi akafanana, Rodrygo akarova zvibodzwa zvake zvekutanga mumakwikwi aya.
Izvi zvakamuita kuti ave mudiki pane vese muBrazil kurova muCopa Libertadores. Rodrygo akapihwawo Campeonato Paulista Best Mutsva we2018.
Rodrygo Anoenda neCampoonato Paulista Mubairo.
Rodrygo Anoenda Biography - Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Rodrygo akatsungirira kukwidziridzwa kwemeteoric kusvika mukurumbira kuti ave imwe yeanopisa dzimba dzevadiki muSouth America, kusimuka kunogona kungo fananidzwa neizvo zvakawanikwa nechidhori chake Robinho.
Unyanzvi hwake hunoshamisa hwekukweva hwakakwezva Real Madrid scouts avo panguva iyoyo vaive pakurwisa kwavo kusingaperi kune vatambi veSouth America, mumwe wavo aive Vinicius Junior.
Iri ndiro zuva rakanyanya kukosha muhupenyu hwake iro rakazoitika. Zuva iro Rodrygo akazadzisa zviroto zvake nekusainira Real Madrid muchibvumirano chakaratidza kuti achanyoreswa nguva isati yakwana.
Chaizvo on iyo 15th yaJune 2018, Real Madrid yakawana chibvumirano neSantos chekutamisa kwaRodrygo, chibvumirano chakazoitika gore rakatevera, June 2019.
Cristiano Ronaldo Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kutanga, yakanga iri yekumirira kwegore re1, yakazosvika nguva yemoyo kwazvo kuna Rodrygo Goes sezvo vabereki vake vakabatana naye mukutaura zvakanaka kubva kune yake yaaida kirabhu yeanoda.
Rodrygo Goes aive nemanzwiro sezvaanoonekana nemudiwa wake Santos. Kiredhiti IG.
“Zvinondikurudzira kuenda kuMadrid, chimwe chezvikwata zvikuru pasi rose. Nezve saizi yakakura yekirabhu, zvinotyisa kwandiri, asi kutya kwakanaka. Zvinondikurudzira zvakanyanya uye zvinoreva kuti Zviri kwandiri kuratidza kuti nei vachivimba neni uye nekundisayina. ”
Rodrygo akadaro achiayina.
Erling Haaland Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Rodrygo akadaro zvirokwazvo ndiyo yakanakisa pakati pemutsara wekugadzirwa kusingaperi kwekushamisa kunoshamisa kunobuda muBrazil. Kwatiri, iye anoonekwa sechipikirwa chinotevera chakanaka kuenda kuBrazil bhora shure Neymar Jnr. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Rodrygo Anoenda Rudo Hupenyu:
Kufunga kuti vabereki vake vakaroora panguva yavo yekuyaruka, zvakanaka kubvunza kana Rodrygo aine musikana kana mukadzi pazera rake diki.
Rodrygo Anoenda Hupenyu Hwehukama.
Kukwira kwaRodrygo mukurumbira uye kujoina Real Madrid kunosiya vateveri kuti vatende kuti a zvinoita romance yakavanzika iripo kwaari, pamwe ingangopukunyuka kuongororwa kweziso reruzhinji nekuda kwekuti hupenyu hwake hwerudo hwakavanzika zvakanyanya uye pamwe nemutambo-wakasununguka.
Sezvo panguva yekunyora, isu tinotenda kuti Rodrygo akasarudza kutarisa nezvebasa rake uye akatsvaga kudzivirira chero chinhu chakajeka pahupenyu hwake hwepachivande, achisiya pasina chirevo pamusoro pehupenyu hwake hwerudo uye nhoroondo yekufambidzana.
Rodrygo Anoenda Hupenyu Hwega:
Kusvika pakuziva Rodrygo Goes hupenyu hwepamoyo kure negomba kwaizobatsira iwe kuwana mufananidzo uzere iye.
Kure kure nenzvimbo, Rodrygo ane chimiro chemukati chekusununguka chinomugonesa kuita fambiro mberi huru muhupenyu hwake hwega.
Iyo nhema nyeredzi inorarama hupenyu hwakajairika kunze kwegomba vachiri kuBrazil. Tichifunga nezve pikicha pazasi, haufanire kushamiswa kuona Rodrygo aine skateboard mumugwagwa weMadrid.
Rodrygo Anoenda ne Skateboard.
Zvakare muhupenyu hwake hwega, Rodrygo Goes ane hunhu hwekuzvidzora, kugona kuita hwakasimba uye hwechokwadi zvirongwa zvehupenyu hwake. Iye mutungamiri anogona kutungamira nzira sezvinoonekwa mukati memazuva ake eutungamiriri padanho revechidiki.
Rodrygo Anoenda Hupenyu Hwemhuri:
Rodrygo Goes vabereki nehama parizvino vari kukohwa bhenefiti yekumisikidza kufunga kwakaomarara maari. Vabereki vake vakatenda rutsigiro rwemwanakomana wavo kuReal Madrid kubva pakutanga kwebasa rake.
Ona chidimbu chevhidhiyo humbowo pazasi apo ane makore 9 okuberekwa Rodrygo akamira nevabereki vake pahembe rekare reReal Madrid. Izvi zvinoratidzwa pamwe chete nemufananidzo wakafanana we2019.
Mufananidzo wemhuri kuratidza humbowo hwekuti Rodrygo anga ari Real Real Fan kubva paudiki. Kiredhiti kuna Marca.
About Rodrygo Goes Baba:
Baba vaRodrygo vane 34-makore-ekuberekwa sepanguva yekunyora. Waizviziva here?… Eric Batista akafananidzirwa pazasi nemwanakomana wake achangobva pamudyandigere kubva pakutamba basa rake kurudyi-kumashure uye parizvino achirarama zviroto zvake sababa semuchengeti pabasa remwanakomana wake.
Rodrygo Goes nababa vake- Eric Batista de Goes. Kiredhiti IG.
Eric Batista ane shamwari nehama vanowanzo mutora se "yekare yeBrazil”Akatamba mumakundano enharaunda yeSao Paulo mune zvinganzi nevakawanda ibasa risina kubudirira.
About Rodrygo Goes Amai:
Kana zvasvika kune venhabvu vane zvakanyanya Gorgeous Moms, isu tinogona kutaura kuti Rodrygo Goes ari pamusoro pechinyorwa. Denise Goes haasi akanaka chete asi mudiki kwazvo (mune ake ekutanga 30's) panguva yekunyora.
Rodrygo Anoenda Amai- Denise Anoenda.
Pakugumburwa papikicha pakutanga kuona usingazive kuti iye ndiani, unogona kufunga kuti iye Musikana waRodrygo.
Rodrygo Anoenda Anobata:
Pakatenderedza kutanga kwa2018, vabereki vaRodrygo vaive nemwana musikana, iyo yakave iri hanzvadzi yaRodrygo uye chete.
Kuva nehanzvadzi diki kwakamuita kuti anzwe sababa uye zvakare, achiziva kuti iye ese akura. Sezvinoonekwa pazasi, kubatana kwakadzama kuripo pakati pehama nehanzvadzi.
Rodrygo Goes anoratidza kuda hanzvadzi yake diki. Kiredhiti IG.
Rodrygo Anoenda HupenyuStyle:
Semunhu waanoshanda naye Takefusa Kobo, Rodrygo zvakare ane hwaro hwakasimba kubva kuvabereki vake. Iye akadzidza maitiro ekuchengeta yake mari mukutarisa nekutenda pasi nevabereki vake.
Senge panguva yekunyora, Rodrygo haatenderwe kurarama hupenyu hwekunakidza hunowoneka nyore nyore nezvikwata zvemotokari dzinodhura.
Rodrygo Anoenda HupenyuStyle Chokwadi. Kiredhiti kuna Mirror.
Rodrygo Anoenda Asina Chokwadi Chokwadi:
Kuwana Zvikomborero zvemaGrats: Asati aenda kuEurope kunobatana neReal Madrid, Rodrygo akagamuchira maropafadzo kubva kunhabvu mbiri dzeBrazil dzinoti Pele uye Senior Ronaldo.
Rodrygo Goes uye ake maRole Models.
Gore iro 2001 iyo Rodrygo akaberekwa akapupurira zvinotevera;
Kutanga, izvo zvinozivikanwa se9 / 11 kurwisa zvakaitika.
Gore iro 2001 rakatorwa se "Zhizha reGore reShark“. Gore rino rakanyora huwandu hwepamusoro hwekurwiswa kwepasi pese.
Gore ra2001 rakaona mishonga yeAids ichipihwa rubatsiro nemutero unosvika pamakumi mapfumbamwe muzana waidiwa kubatsira kurwisa chirwere chinouraya, kunyanya muAfrica.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Rodrygo Goes yeChinyorwa Chemwana uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzike zvakanaka, ndokumbirawo ugovere nesu nekupindura pazasi. Tichagara tichikoshesa nekuremekedza mazano ako.
Karim Adeyemi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Paul Onuachu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Marc Cucurella Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Maxwel Cornet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Theo Hernandez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi